UXiaomi uqinisekisa iifowuni zokuqala eziza kuba ne-Android Q kwi-2019 | I-Androidsis
UXiaomi uqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni eziza kuba ne-Android Q beta kulo nyaka
Iibhetas ezintsha ze-Android Q ziza kwiifowuni ezininzi kunangaphambili. Besisele siyibona kwesesithathu, Esungulwe kwiimodeli zeemveliso ezininzi, ezinje ngeXiaomi. I-beta yesine yasungulwa ngokusesikweni kutsha nje, ke sinayo isibini nje see-betas, Phambi kokuba iphehlelelwe ngokusesikweni, nekufanele ukuba ibekho ngo-Agasti walo nyaka.
Ngesi sizathu, iimveliso zilungiselela ukuhlaziya iifowuni zazo kamva kulo nyaka. UXiaomi ngomnye wabo, osishiya sineedatha malunga noku. Ukusukela ukuba umenzi odumileyo waseTshayina usibonise Uluhlu lweefowuni eziza kufumana i-Android Q kuhlobo lwe-beta kwi-MIUI phambi kokuphela kwalo nyaka.
Uhlobo lwesiTshayina isishiya noluhlu olunezimanga ezimbalwa malunga noku. Kuba njengesiqhelo kula matyala, iifowuni zabo eziphezulu ziya kuba zezokuqala ukufikelela kwi-beta ye-Android Q. Oku kuqhelekile kwintengiso, kungakhange kubekho mmangaliso kulo mbandela ovela kuhlobo lwesiTshayina.
IXiaomi Mi 9T isungulwe ngokusesikweni eSpain
UXiaomi ukwangqina ukuba iya kuba kwikota yesithathu kulo nyaka xa ezi fowuni ziya kuba nokufikelela kule beta ye-Android Q. Ke uphawu lwaseTshayina luya kuyenza ukuba ifumaneke ngokukhawuleza okukhulu, ngale ndlela. Nangona okwangoku kungekho nto ithethwayo malunga nokuba sinokulindela ukuba ingxelo ekhuselekileyo ikhutshwe kwezi modeli. Uluhlu lweefowuni eziqinisekiswe luphawu lwaseTshayina zezi zilandelayo: Xiaomi Mi 9, Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T), Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 9 SE kunye neRedmi K20 Pro.
Njengoko sibona, zimbalwa izinto ezimangalisayo kolu luhlu. Sifumana iimodeli zakutshanje kwisiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina, NjengoRedmi K20 Pro, okwangoku asazi ukuba iya kufika eSpain. Ukongeza kwiimodeli ezazisungulwe kunyaka ophelileyo kwintengiso, kunye neemodeli ezimbalwa zaphakathi kwepremiyamu. Kodwa ziifowuni eziqhelekileyo ekulindeleke ukuba zibe zezokuqala ukuzihlaziya. Bambalwa othusayo kwicala lakho.
UXiaomi uthe umgaqo, ezi terminari ziya kuhlaziywa kwikota yokugqibela yalo nyaka. Nangona inkampani ngokwayo isithi amaxesha ayahluka kule meko. Kuba abaxhomekekanga kubo nakweyiphi na imeko, kodwa baya kuba yinto exhomekeke kwiintshukumo ezikwinkqubo ye-beta kaGoogle. Ukongeza, imihla yosasazo lokugqibela inefuthe, kodwa okwangoku ayaziwa. Ukongeza, kufuneka kukhunjulwe ukuba olu hlaziyo luhambelana nohlobo lophuhliso lwe-MIUI olusebenza phantsi kwe-Android 10 Q. Oku kuthetha ukuba kuguqulelo lwehlabathi kufuneka ulinde ixesha.
UXiaomi ukwaqinisekisa ezinye iifowuni eziya kuthi zikwanakho ukufikelela kuhlaziyo kwi-Android Q. Inqaku leRedmi 7 yenye yazo, esele ibonakalisiwe yinkampani. Iindaba ezimnandi zabasebenzisi abanoluhlu oluphakathi, impumelelo kwimarike yohlobo lwaseTshayina. Nangona kwimeko yabo kuya kufuneka balinde kude kube yikota yokuqala ye-2020 ukuba babe noku kuhlaziywa ngokusemthethweni kwifowuni. Nantsi ke into etshilo uphawu lwaseTshayina kwezi ngxelo.
Ngokuqinisekileyo emva kokuba i-Android Q isungulwe siya kuyazi ukuba zeziphi ezinye iimodeli ezinokuhlaziya. Kwelinye icala, akufuneki silibale ukuba IXiaomi Mi A2 nayo iya kuba ngomnye wabo baya kuba nokufikelela kuhlaziyo ngaphambi kokuphela konyaka, kunye neMi A3 ekufuneka ifike kwintengiso kweli hlobo. Kodwa ukwazi imihla ethe ngqo apho ezi fowuni zebranti ziya kuba nakho ukufikelela kuyo, kuya kufuneka silinde ithutyana, kunokwenzeka kwiinyanga ezimbalwa ezizayo ukuba sibe neenkcukacha ezithe kratya malunga nayo ukusuka kuhlobo lwesiTshayina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UXiaomi uqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni eziza kuba ne-Android Q beta kulo nyaka
Isamsung ibeka ezi wallpapers zeDisney kunye nePstrong zeGPS S10 simahla
Ubhaliso lwangaphambili kubaChaseli beMfazwe: I-Nightwar evela kwiMidlalo eSebenzayo iyafumaneka ngoku